ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာသည် ကာဘော်လစ်အက်ဆစ် (သို့/နှင့်) ကရီးဆောလ်(Cresol or cresylic acid ) တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပိုးသတ်ဆပ်ပြာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကာဘော်လစ်အက်ဆစ်နှင့် ကရီးဆောလ်တို့သည် ကတ္တရာစေး(သို့) ရေနံစိမ်းမှ ရရှိနိုင်သည်။
ဤဆပ်ပြာကို ရေချိုးဆပ်ပြာ(ကိုယ်ခန္ဓာတိုက်ရန်)အဖြစ် အသုံးပြုသောအခါ ပိုးမွှားများကို သတ်ပေးသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဆပ်ပြာသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အနံ့သက်ပျောက်ဆေးအပျော့အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေး၏။ ယခုထိတိုင်အောင် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့နှင့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းအချို့က ဘေးအန္တရာယ်ခံစားရသော ဒုက္ခသည်များအတွက် ဤဆပ်ပြာကို ဝေပေးလျှက်ရှိသည်။ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာကို အရေပြားရောဂါ ကင်းစင်စေရန် ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမှစ၍ အသုံးများလာခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့ခေတ်တိုင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးပါသော ဆပ်ပြာများ မပေါ်မီခေတ်တွင် ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာသည် ကျန်းမာရေးဆပ်ပြာဟုပင် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာသည်ဖုန်မှုန့်များအတွင်းကိန်းအောင်းနေသောရောဂါပိုးများကိုသုတ်သင်ပစ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်က အိမ်တွင်မကျန်းမမာဖြစ်ပြီးသောအခါတိုင်းအဝတ်အထည်ကြမ်းများနှင့်ပရိဘောဂများကိုကာဘော်လစ်နှင့်ဆေးကြောပစ်ပါ ဟူ၍ အသုံးတွင်ကျယ်ခဲ့သည်။ ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာသည်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားများကိုအမှန်တကယ်သေစေသည်။ ထို့ပြင် မျက်နှာပေါ်ရှိ မှိုနှင့် ဝက်ခြံများကိုပင်သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
ကာဘော်လစ်၏ အစွမ်းထက်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များတွင် ကာဘော်လစ်အဆီနှင့် ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာများကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါသည် အရာဝတ္ထုများ၌ ထိကပ်နေသော ရောဂါပိုးများအား လက်နှင့်ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ရာမှ ကူးစက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ကို စင်ကြယ်အောင် မကြာခဏ စနစ်တကျ ဆေးကြောသင့်သည်။ ထိုသို့ ဆေးကြောရာ၌ ငွေကြေးကုန်ကျမှုများသက်သာစေရန် တန်ဖိုးနည်း ပြည်တွင်းဖြစ် ကျန်းမာရေးဆပ်ပြာ ကာဘော်လစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
↑ W. H. Simmons and H. A. Appleton, The Handbook of Soap Manufacture, Echo Library, 2007, p. 104.
Definition of carbolic soap။ Allwords.com (2007-03-29)။ 2010-08-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cresylic acid | chemical compound။
↑ ReliefWeb ť Document ť West Africa Appeal No. 01.02/2001 Programme Update No. 2။ Reliefweb.int။ 2010-08-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Village Education Resource Center။ VERC။ 2010-08-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာ&oldid=515751" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၂:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။